About Us - Foshan Fumei yokuhlala Co., Ltd
School edeskini izihlalo
Inkampani yethu ube uchwepheshe, eliphezulu lokuphatha nokuthuthukisa abasebenzi abanye. Anikela ekuthuthukiseni kanye nokuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo, ubuyekeza isitayela umkhiqizo kanye nomklamo ukwenza inkampani yethu udlulela phambili. Bayoba siqiniseke ukuthi yonke imikhiqizo yethu luzothunyelwa ku ikhasimende nge high ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Sine ezinye legatsha yasekhaya e Beijing, Tianjin, Shanghai, Guangzhou, Liaoning, Ha'erbin, Jilin, Shandong, Zhengzhou, Suzhou, Fujian, Wuhan njll Imikhiqizo yethu futhi ukuthekelisa eMelika, e-Australia, eRussia, Middle East, Africa, South eMpumalanga Asia nakwamanye amazwe.
Ukuhlala gxila samanje futhi ngabomvu esizayo, thina agcwele ukuzethemba nimise ukuthuthukiswa luhlelo lwesikhatsi lesidze esethemba ngobuqotho ukuba ubambisane abangane emhlabeni wonke, ukuze sifinyelele isifiso win win-kokubili wena nami . Sinquma yokuhlanganyela nabantu amakhasimende amasha namadala ukudala isisekelo ekhulwini ubudala futhi esikhathini esizayo esihle.